सफल व्यवसायी पाण्डे भन्छन् - प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउने विश्वास छ
Saturday, 8 Sep, 2018 11:45 AM
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे एक सफल व्यवसायी हुन । महासंघको दुइकार्यकाल उपाध्यक्ष बनेका उनी अध्यक्ष बनेपछि भने विवादमा तानिए । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पञ्चायतकालिन भ्रष्टाचारको मुद्दा व्युँतेर पाण्डे पदमुक्त भएका थिए । २०४२ सालमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा कर्मचारी हुँदा भष्ट्राचार ठहर भएको र उनले त्यस वापत सजाय भुक्तान नभएको भन्दै निर्वाचनमा पराजित भाष्करराज राजकर्णिकारले प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए ।
पाण्डेले तत्कालिन श्री ५ बाट आफुले माफी पाइसकेको भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपनि उनको माग अस्वीकार गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय काट्नुपर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो । तत्कालिन श्री ५ र राष्ट्रपतिले समेतले माफी दिएपछि उनी दोषी नरहेको सर्वोच्च्को ठहर छ । अदालतबाट दुईबर्ष पछि न्याय पाएका पाण्डे हिजोआज गुमनाम जस्तै देखिएका छन् ।
४५ बर्ष व्यवसायमा बिताएका उनले एउटा उचाई चुमिसकेका थिए । उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्न पाउनु गर्वकै बिषय थियो । त्यतिमात्र नभएर उनले इमान्दार व्यवसायीको पहिचान बनाएका थिए तर एकाएक विवादमा तानिदा उनको छविमा नै आँच आएको थियो ।
प्राय व्यस्त र चर्चामा आइरहने प्रदिपजंग पाण्डे सर्वोच्चबाट न्याय पाएपछि किन गुमनाम बने ? गैरीधारास्थित उनको कार्यालय लोमस फर्मासिटीमा संवाद आरम्भ गर्दा यही प्रश्नबाट गर्यौं ।
तपाई त हराउनुभयो नी ? ‘म हराएको छैन, उद्योग वाणिज्य महासंघको जिम्मेवारीमा रहँदा राष्ट्रपति समर्पित भएर काम गरे । तर अहिले त्यो भूमिकामा छैन । त्यही भएर धेरै चर्चा नभएको मात्रै हो । तर म पहिलाको भन्दा सक्रिय भएर काम गरिरहेको छु ।’
आफु सक्रिय रहेको संस्थाबाट हाल ५ हजार व्यक्तिलाई रोजगार दिएको उनले सुनाए । आफनो व्यापारलाई तिव्र गतिमा बढाउने काममा केन्द्रित भएका छन् उनी । सरकारलाइ कर तिर्नेमा पनि उनको कम्पनि अग्रणीमा पर्छ । ‘करोडौ कर तिर्छ हाम्रो कम्पनीहरुले । त्यो त सरकारका लागि राम्रो हो नी, होइन ? व्यवसायमा सफलता हासिल गर्दै गएका उनले शुरुवातमा लोमस फर्मासिटी औषधीको व्यवसाय थालेका थिए । ३४ बर्ष पुरानो कम्पनी लोमस फर्मासिटी नेपालकै पहिलो औषधी कम्पनी भएको उनी बताउँछन् ।
एउटा व्यवसायबाट सफलता हात पारेपछि मात्रै अर्को व्यवसायको थालनी गर्ने उनको योजना हुन्छ । आफ्नो यही टेक्निकका कारणपनि व्यवसायमा सफल हुन सकेको उनी बताउँछन । ‘एकै चोटी धेरैतिर तिर हात हाल्ने मेरो बानी छैन’ व्यवसायमा सफल हुनुको सुत्र बताउँदै उनले भने,‘म सधै एउटालाई सफलताको सिष्टममा पुर्याएपछि मात्रै अर्को शुरुवात गर्छु ।’ एकपछि अर्को व्यवसायमा सफलता हासिल गर्दै जाँदा उनी अहिले शिखर इन्स्योरेन्स, सिटिजन वैक, कसमस सिमेन्ट, कसमस इष्टन सिमेन्ट, कैलाश हेलिकप्टर लगायतको व्यवसायमा सफल बनेका छन् । उनी भन्छन्, ‘म संलग्न संस्थाले हाल करोडौ कर तिर्छ, हामीले जनउत्तरदायी काम पनि गरेका छौं ।’
व्यवसायका क्रममा उनले हन्डर र ठक्कर नखाएका भने होइनन् । तर कहिले निरुत्साहित भएनन्, पछि हटेनन् । ‘हिजो उद्योग बाणिज्य महासंघको पदबाट हट्नुपर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र गृहमन्त्री बामदेव गौतमले प्रदिपजंगलाइ अन्याय भयो भन्नुभयो । तर अन्याय भयो भएन सर्वोच्च नै बोल्नुपर्छ भनें । जुन तरिकाले सर्वोच्चले बोल्यो, मैले पनि सर्वोच्चले नै दोषी छैन भन्नुपर्छ भनेर अड्डी लिए र त्यो भयो पनि । डेढबर्ष अगाडि म माथि लगाइएका सबै आरोप सत्य प्रमाणित भएनन्् । अहिले त्यो समस्या छैन सवै सकाए’ उनले भने ।
अध्यक्ष पदबाट हट्नु परेपनि आफुमा इगोको भावना नभएकोले सहज भएको उनी ठान्छन । ‘म कसैसँग रिभेन्ज लिंदिन । मेरो प्रतिशोध लिने बानी पनि छैन । मेरा लागि पद ठूलो कुरा पनि होइन । तर कहिलेकाँही राम्रो काम गर्दापनि दोष त आउने रहेछ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सक्रिय रुपमा काम गरेपनि उहाँका सहयोगी मन्त्रीहरुले त्यो भावना र गती समात्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको रफ्तार अनुसार काम गर्न सकेका छैनन । सरकारको अहिले नै मुल्यांकन गर्ने बेला त भएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले जुन उदेश्य लिनुभएको छ, आफू जस्तै काम गर्ने १० जनाजति लिएर हिड्नुभयो भने मात्रै उहाँ सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।’
एउटा उचाइबाट एक्कै चोटी तल झर्नुपर्दा धेरैले उनीमाथि शंका पनि गरे कतै प्रदिपजंग डिप्रेसनमा त गएनन ? तर उनी यो कुरा मान्न तयार छैनन् । भन्छन, ‘म डिप्रेसनमा कहिल्यै पनि जाँदिन । किनभने मैले जीवन राम्रोसँग बुझेको छु । मैले जतिसुकै कमाए पनि लिएर जान सक्दिन तर जति बाँच्न सकिन्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।’ उनीभन्दा साना साथीभाई कतिपय बितिसके, कतिपय रोग लागेर बसेका छन तर उनी स्वस्फूर्त रुपमा काम गर्न सकेकोमा गर्व गर्छन् ।
बाँच्नु र खानुलाई ठूलो कुरा नठान्ने उनी राष्ट्रप्रति भने इमान्दार हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । औषधी व्यवसायमा लामो समय गुजारेका पाण्डेले यसअघि धेरै समस्या झेलिसकेका छन । पञ्चायती शासन, १० बर्षे जनयुद्ध, ६२÷६३ को आन्दोलन, लोडसेडिङले व्यवसाय धेरैपटक धरासयी बन्योे । ‘सबै सहेर पार गरेर आएका छौं । अहिले त नेपालमा स्वर्ग छ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भने निक्कै आशावादी रहेको पाण्डे बताउँछन । ‘अहिले उहाँमाथि धेरै समस्या छन तर बाधा अड्चन आयो भनेर आत्तिन हुँदैन । एउटा ट्रयाकमा पुगेपछि फेरि झाँगिएर जान्छ ।’ उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छन् ।
औषधी उत्पादनमा लामो समय बिताएका उनी प्रधानमन्त्रीबाट निक्कै प्रेरणा पाउन सकिने बताउँछन । ‘म यतिका बर्षदेखी औषधी बनाउँदै आएको छु । तर म विरामी भए भने हत्तपत्त औषधीको प्रयोग गर्दिन । किनकि मलाई थाहा छ औषधीको साइड इफेक्ट हुन्छ । तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दैनिक १२÷१३ वटा औषधी खानुहुन्छ । त्यसले कति साइड इफेक्ट गर्छ होला ? त्यति हुँदाहुँदै पनि केही साइड इफेक्ट नदेखिने गरि जहिल्यै हँसिलो अनुहार, उत्तिकै सक्रिय भएर दुइबजे रातीसम्म काम गर्नुहुन्छ । त्यो त राष्ट्रको लागी ठूलो कुरा हो हामीले उहाँबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने जोशबाट आफुलाई पनि काम गर्ने जाँगर आउने गरेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सक्रिय रुपमा काम गरेपनि उनका सहयोगी मन्त्रीहरुले भने प्रधानमन्त्रीको रफ्तार अनुसार काम गर्न नसकेको उनलाई लागेको छ । ‘सरकारको अहिले नै मुल्यांकन गर्ने बेला त भएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले जुन उदेश्य लिनुभएको छ, आफू जस्तै काम गर्ने १० जनाजति लिएर हिड्नुभयो भने मात्रै उहाँ सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ’ उनको सुझाब छ ।